यस्ता छन् हाँस्दा जस्तै रुँदाका फाइदाहरु जानेपछि आश्चर्य लाग्ला - ज्ञानविज्ञान
मनोचिकित्सकहरुको भनाई अनुसार कहिलेकाही रुनले कुनै प्रकारको हानि – नोक्सानी हुँदैन । रुनले व्यक्ति तनावरहित एवं आफुलाई हल्का महशुस हुन्छ । आँखाबाट झर्ने आँशु व्यक्तिको मर्म र भावनालाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
जब कसैले हामीलाई आघात पुर्याउछ वा हामी अत्याधिक दुखी हुन्छौं, त्यस अवस्थामा हामी रुन्छौ । आखाँबाट आँशु झर्नथाल्छ । यसरी आँखाबाट खसेको आँशुले तनावबाट मुक्त गर्दछ । मनोबैज्ञानिकहरु भन्छन्, ‘बिपत्ति, दुख र अत्याधिक तनावको स्थितिमा पनि यदि कुनै व्यक्तिको आँखाबाट आँशु आउँदैन अथवा रुँदैन भने सम्झिनु कि त्यो व्यक्ति मानसिक एवं शारीरकरुपले अस्वस्थ्य छ ।
यदि कुनै महिलालाई बिपतको घडिमा पनि आँशु आउँदैन भने सक्झिनुस्, त्यो महिला भित्रबाट नै सुकेको पात जस्तै हो वा पात बिहीन रुख जस्तै छ । आँशुको अभावको कारण आँखाको रोग, गठियाबात, घाँटीको रोग, स्वेतप्रदर आदि हुनसक्छ । भक्कानो छोडेर वा सुक-सुक गरेर रुनु शरीरको लागि स्वस्थ्य कर मानिन्छ ।
यस अवस्थामा व्यक्ति एउटा बालकको जस्तो शारीरिक एवं मानसिक तनावबाट आफुलाई खुला र खुकुलो छोडदिन्छ र रुन सुरुवात गर्दछ । जब मानसिक या शारीरिक दुख, दर्दस‌ँग व्यक्तिको मुठभेड हुन्छ, त्यसको प्रतिकृया स्वरुप हाम्रो शरीरको मांशपेशीहरु संकुचित हुन थाल्छन् । जुन शरीरको रक्षातन्त्रको एक प्रकृया हो ।
जुन बेला हामी दुर्घटनाबाट गुज्रिरहेका हुन्छौ, त्यसबेला अत्यfधिक पीडाले गर्दा, हामी आफुलाई सन्तुलन गर्न सक्दैनौ । शरीरले आफ्नो क्षमताको कारण अत्याधिक कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो सन्तुलनलाई गुमाउदैन ।
जब कठिन परिस्थिति बितिसक्छ, तव मांशपेशीहरुमा जम्मा भएर रहेका तनाव आँशुको रुपमा आँखाबाट निस्किन थाल्छन् । एक स्वस्थ्य र सन्तुलित शरीर सहजताले दुख, दर्द, पीडाबाट उत्पन्न शारीरिक तनावलाई आँशुद्वारा व्यक्त गर्ने बाटो बनाउँछ ।
एक सर्वेक्षण अनुसार पुरुषको तुलनामा महिला कम तनावग्रस्त हुन्छन् । उनीहरु भावनालाई सजिलैसित आँशु को माध्यमले व्यक्त गर्दछन् । यसै कारण होला पुरुषको तुलनामा महिलामा ह्रदयरोग कम हुन्छ । कुनै-कुनै परिवारमा वंशानुगत एक किसिमको रोग पाईन्छ, जसलाई फैमिलियल डिस्टोनिया भनिन्छ ।
यसमा जव बच्चा रुन्छ तर उसको आँखाबाट आँशु झर्दैन । आँखा सुख्खा रहन्छ । यस्ता केटा-केटीहरु क्रुर, झनक्क रिसाउने र आक्रमक प्रवृतिका हुन्छन् । यस्ता बच्चाहरुको पूर्णरुपले मानसिक बिकास हुन पाउँदैन ।
आँशुले दुख, चिन्ता, तनाव, क्लेश तथा मानसिक तनावलाई फेस गर्नमा व्यक्तिलाई मद्दत गर्दछ । मनोचिकित्सकहरुका अनुसार रुनले मानसिक तनावबाट मुक्ति मिल्नुकासाथै उच्च रक्तचाप, फिस्टुला आदि जस्ता रोगबाट छुट्कारा पाउनमा सहायता मिल्छ । यसको अलावा तनावबाट उत्पन्न हुने मनोदेहिक रोगहरु हुने संभावना हुँदैन ।
रुने बेलामा आँखा बाट झरेको आँशुले आँखामा रहेको विजातीय द्रव्यलाई बाहिर निकाल्ने कार्य गर्नुको साथै आँखालाई रसिलो पार्ने तथा संक्रमणबाट बचाउने कामपनि गर्दछ । मेडिकल युनिभर्सिटी अफ ओहियो (जापान) का शोधकर्ताहरुले “आँशुबाट हुने फाइदा” आफ्नो अध्य्यनमा पनि पाए । रिपोर्टमा भनेका छन्, ‘रोई सकेपछि अधिकतर मानिसहरु आफुलाई हल्का र ताजा महशुस गर्दछन् ।’ शोधका अनुसार ८८.८ प्रतिशत मानिसहरु रोएपछि हल्का महशुस गर्दछन् भने ८.४ प्रतिशत मानिसहरु मात्र रुदा पनि दुखी नै हुन्छन् ।
आँखामा आँशु आउनाले आँखाको नानी र परेलीको रसिलोपन बढ्दछ । वैज्ञानिकहरुले यसलाई सिद्धागरेका छन् कि रुनले आँखाको सुन्दरता बढ्दछ । ति वैज्ञनिकहरुको मतानुसार आँखाको कर्नियाको परत कंजकटाईवालाई आश्रुग्रन्थीद्वारा निस्किने आँशुले ओसिलो बानाईदिन्छ ।
जस्को फलस्वरुप आँशुमा रहेका शारीरिरका तत्वहरुद्वारा सुन्दरता निखारेर आउँछ । आँखाबाट आँशु निस्किने बेला हारडेरीयन ग्रन्थीबाट एक प्रकारको तेलीय पदार्थ निस्किन्छ, जसको सहायताले कोर्निया नरम र गहिरो हुन् जान्छ । महिलामा पुरुषहरुको तुलनामा बढि आँशुको उत्पादन हुन्छ । यही कारण होकि महिलाहरुको आँखा बढि सुन्दर हुन्छन् । यद्यपी अत्याधिक रुनले आँखाको दृष्टी गुम्न पनि सक्छ ।
ब्याक्टेरियालाई समाप्त गर्छ
आँशुमा यस्तो किसिमको एन्टिबायटिक्स् पाईएकोछ, जसले किटाणुबाट आँखाको रक्षा गर्दछ । आँशुमा एकप्रकारको लिसोजाईम नामक तरल पदार्थ हुन्छ, जसले ५ / १० मिनटमा नै नब्बे देखि पन्चनब्बे प्रतिशत ब्याक्टेरियाहरुको सफाया गर्नसक्छ । शरीरबाट टक्सिनलाई निकाल्दछ ।
अनुसन्धानबाट देखिएको कुरा के हो भने, जब हामी बढि दुखी वा अवसादमा हुन्छौ, त्यस्तो बेला शरीरभित्र केहि टक्सिन केमिकल्स बन्न थाल्छन् । जुन बिषक्त तत्वहरु रुँदा आँखाबाट आँशुको रुपमा बाहिर निस्किन्छ । मुड ठिक भएको बेला कहिलेकाही शरीरमा मेग्जिन नामक तत्व बढिभएर घबराहट, परेसानि, थकान, अनाहकमा रीस उठ्ने जस्तो समस्या देखिन्छ ।
यस अवस्थामा रुनले शरीरमा मेग्जिनको स्तर कम हुन्छ । जसको फलस्वरुप व्यक्ति आफुलाई हल्का, राम्रो महशुस गर्न थाल्दछन् ।
अत्यधिक तनावको अवस्थामा रुनले केहि मात्रामा राहत मिल्दछ । रुने प्रकृयाको दौरान शरीरमा एंडोफ्रिन ल्युकामाईन, एकांफालिन तथा प्रोलेक्टिन नामक तत्वहरुको स्तर कम हुन्छ । जसले गर्दा तनाव कम हुन्छ ।
तर यो सत्य हो, अत्याधिक रुनले यसको उल्टो पनि असर हुनसक्छ । त्यसैले आँशुको रहस्यलाई अहिले पनि बुझ्न र सुल्झाउन बाँकी नै छ । तर, यसमा कुनै सन्देह छैन की आँशु बगाउनु हाम्रो लागि लाभदायक र स्वास्थ्यकर छ ।
यसले तपाईंको मौलिकतालाई जोगाइराख्छ र तपाईंको मौलिकतासँग सहमत व्यक्तिको संगतमा तपाईंलाई पु¥याउँछ, जुन खुशी रहन सहायकसिद्ध हुन्छ ।
Don't Miss it पटक-पटक पिसाब किन आउनुछ, यस्त छन् कारण जानिराखौँ
Up Next गर्मीमा अनुहारलाई यसरी सुन्दर बनाउनुहोस्
नाइटोमा नरिवलको तेल लगाउदा के के फाइदा हुन्छ ? जानुहोस
१. पेटका मांसपेशी र मासिक धर्ममा आरामः नरिवलको तेलमा एन्टि अक्सिडेन्ट गुण हुने भएकाले पेटको मांसपेशीहरुको तन्काईको कारणले उत्पन्न हुने…
डा. वसन्त पन्तका अनुसार मस्तिष्कघात हुँदा ५० प्रतिशत मानिसको मृत्यु तुरून्तै हुन्छ भने ५० प्रतिशत अस्पताल आइपुग्छन् । अस्पताल आइपुगेकामध्ये…
स्वस्थ र अाकर्षक बन्न अपनाउनुहाेस् यी उपाय
इटालियन पिज्जा बनाउँने हो ? यसरी सिक्नुहोस् – भिडियो सहित
तपाई इटालियन पिज्जा बनाउँन चाहनु हुन्छ ? पिज्जाका पारखीहरुका लागि यो तरिका एकदमै सजिलो तरिका हो । यदि तपाईको घरमा…
यस्ता छन्, टिबी रोगका लक्षण
टिबी रोग एक सरुवा रोग हो । लगातार खोकी लाग्नु, खकारमा रगत देखिनु, ज्वरो आउनु टिबी रोगका लक्षण हो । यसका अरु पनि…